अब कुन बैंकमा कति ब्याज दर ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyअब कुन बैंकमा कति ब्याज दर ?
अब कुन बैंकमा कति ब्याज दर ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ ब्याज दर ल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सुरु भएसँगै विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ ब्याज दर तय गरेका हुन् । नयाँ ब्याज दर बुधबारदेखि नै लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गएको हप्ता राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतमा दिइने र ऋणमा लिइने ब्याज दरबीचको अन्तर तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिकको समीक्षा गर्दै मुद्दति निक्षेपको माथिल्लो र बचतको न्यूनतम ब्याज बीचको अन्तर ५.५ भन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत घोषणा गरेको थियो ।
अहिले धेरै बैंकहरुले साधारण बचत खाताको ब्याज दर २.५ भन्दा तल झारेका छन् । जसले बचतकर्तालाई निराशा बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याज दर धेरै घट्न नदिनका लागि ल्याएको नीतिले खासै काम गर्ने देखिएको छैन । तर, बैंक ब्याज दर घट्दा सेयर बजारलाई भने प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नयाँ ब्याज दर अनुसार बचतको न्यूनतम ब्याजदर २.५ र अधिकतम ४.५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज दर ७.२५ निर्धारण गरेको छ । यो ब्याजदर निश्चित क्षेत्रकाले मात्र पाउँछन् भने आम बचतकर्ताका लागि मुद्दतिमा अधिकतम ब्याज दर ७.५ छ ।
नयाँ ब्याज दर अनुसार कृषि विकास बैंकले बचतको ब्याज ३.५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर ७.२५ कायम गरेको छ ।
नेपाल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज २.५ देखि अधिकतम ४.५ सम्म ब्याजदर कायम गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७.५ तोकेको छ । असोज मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ६.८१ छ । यसमा १.५ देखि ४.६६ सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा दिन्छ । स्थिर ब्याजको न्यूनतम ब्याजदर ९.३५ देखि १३.३५ सम्म छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बचत खाताको न्यूनतम ब्याज दर २.२५ र अधिकतम ४.२५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर भने ९.५ राखेको छ । ९.५ ब्याज दर ५ वर्षभन्दा माथिका निक्षेपकर्तालाई मात्र हो । बैंकले एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज दर ७.७५ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, ३ महिनाको मुद्दतिमा ५.५ र ६ महिनादेखि १ वर्षको लागि ६.७५ रहेको छ ।
स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २.५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ६.५ रहेको छ ।
एनआइसी एसिया बैंकले अहिले मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर घटाएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार मुद्दति निक्षेपमा ६.५ सम्म ब्याज पाइनेछ । बैंकको कात्तिक मसान्तसम्मको आधार दर ६.५० छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकले बचतको ब्याज १.५ देखि ३.५ तोकेको छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ६.५ र न्यूनतम ४.५ निर्धारण गरेको छ । यता, बैंकको कात्तिक मसान्तसम्मको आधार दर ८.३७ छ । यसमा न्यूनतम १.५० देखि अधिकतम ५.५ सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने बैंकले जनाएको छ ।
नबिल बैंकले बचतमा न्यूनतम १.५० देखि अधिकतम ३.५० सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिमा अधिकतम ८.५ दिने भनेको छ । एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज ७.५० मात्र छ । स्थिर ब्याजमा घर कर्जाको लागि बैंकले न्यूनतम ८.४९ देखि ११.५० सम्म ब्याजदरमा कर्जा दिने बताएको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज २.५० र अधिकतम ४.५० राखेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ८.५ कायम गरेको छ । ८.५ ब्याज ३ वर्षदेखि माथिको मुद्दति निक्षेपका लागि हो । एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज साढे ७.५० छ ।
एनएमबी बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर ३.५ र अधिकतम ५.५ तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ८.५ र न्यूनतम ५.७५ तोकेको गरेको छ । असोज मसान्तसम्मको अधारदर ७.८५ रहेको छ । यसमा अधिकतम ५.५ सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाई छ । स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम ९.२५ देखि अधिकतम १२.२४ सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ ।
मेगा बैंकले बचतको न्यूनतम २.५० देखि अधिकतम ४.५० सम्म ब्याज दर लागू गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ७.५० निर्धारण गरेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले नयाँ ब्याज दर अनुसार बचतको न्यूनतम ब्याज २.५ देखि अधिकतम ४.५ सम्म तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७.५ तोकेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज २.५० देखि ४.५० सम्म निर्धारण गरेको छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ८.५० निर्धारण गरेको छ । एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज भने ८.२५ कायम गरेको छ ।
कुमारी बैंकले पनि बचत खातामा न्यूनतम १.७५ देखि अधिकतम ४.५० ब्याजदर तोकेको छ भने व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ५.५० देखि ७.५० सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
नयाँ ब्याजदर अनुसार सानिमा बैंकले बचतको ब्याज न्यूनतम २.५० निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको १०.५ निर्धारण गरेको छ । यो ब्याज ५ वर्षे मुद्दतिको हो । एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज भने ७.५ छ ।
सिद्धार्थ बैंकले बचतमा न्यूनतम २.५ देखि अधिकतम ४.५ सम्म ब्याजदर दिने उल्लेख गरेको छ । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम ६.५ देखि अधिकतम ७.५० सम्म ब्याजदर दिने भएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले बचतमा न्यूनतम २.५ ब्याजदर तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिमा अधिकतम ८.५० ब्याज निर्धारण गरेको छ ।
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर ३.५ निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत मुद्दतिको ८.५ निर्धारण गरेको छ ।
लक्ष्मी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम २.५ देखि अधिकतम ४.५ सम्म ब्याजदर तोकेको छ । मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ३ महिनाका लागि ६.५५ देखि ५ वर्षभन्दा बढीको हकमा ८.५५ ब्याज दिनेछ ।
सनराइज बैंकले बचतमा न्यूनतम २.५ देखि अधिकतम ३.५० सम्म ब्याज दिने भएको छ भने मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७.५ ब्याज निर्धारण गरेको छ ।
बैंक अफ काठमान्डूले बचततर्फ न्यूनतम २.५ देखि अधिकतम ३.५० सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ भने व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ५.५ देखि ७.५ ब्याजदर तोकेको छ ।
प्रभु बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर २.५ निर्धारण गरेको छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ७.५० ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
Previous articleलिभरपुल र एभरटनको जित , आर्सनल बराबरीमा रोकियो
Next articleमाघ पहिलो साताबाट स्नातक र स्नातकोत्तरको परीक्षा